चीनबाट भोलि कोरोनाविरूद्धको ८ लाख डोज खोप आइपुग्ने, खोप लगाउने प्राथमिकतामा को पर्छ ? - सुनाखरी न्युज
चीनबाट भोलि कोरोनाविरूद्धको ८ लाख डोज खोप आइपुग्ने, खोप लगाउने प्राथमिकतामा को पर्छ ?
Posted on: May 31, 2021 - 4:42 pm
चीनले अनुदानमा दिने कोरोनाविरूद्धको १० लाख डोज खोपमध्ये ८ लाख डोज भोलि (मंगलबार) नेपाल आइपुग्दैछ। योपटक चीनले दिएको १० लाख डोज खोपमध्ये ८ लाख डोज खोप लिन नेपाल एयरलाइन्सको जहाज सोमबार राति बेइजिङ जाँदैछ। उक्त खोप लिएर जहाज मंगलबार बिहान नेपाल आइपुग्ने एयरलाइन्सले जनाएको छ। बाँकी २ लाख डोज भने तिब्बत सरकारले प्रदान गर्ने र खोप स्थलमार्ग भएर आउने बताइएको छ।
अब भोलि आइपुग्ने थप खोप भने कसलाई लगाउने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको खोप शाखाका प्रमुख डा। झलक गौतमले चीनले दिएको खोप कसलाई लगाउने भन्नेबारे टुंगो गर्न छलफल भइरहेको जानकारी दिए। ‘अहिले हामी छलफलमै छौं। खोप कसलाई दिने भनेर निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने।
यद्यपि चीनबाट आउने खोप दुई तीन वटा प्राथमिकतालाई टुंगोमा पुर्‍याएर वितरण गर्न सकिने डा। गौतम बताउँछन्। जस अनुसार पहिलो प्राथमिकता ५५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका मानिसलाई राखिएको छ। गौतम भन्छन्, ‘५५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका धेरै मानिसले दोस्रो प्राथमिकतामा परेर पनि खोप पाएका छैनन्। त्यसैले एउटा त्यो समूह हुनसक्छ।’
दोस्रो हटस्पटु ठाउँहरूलाई पनि केन्द्रितमा राखेर चिनियाँ खोप वितरण गर्न सकिने डा. गौतम बताउँछन्।
तेस्रो चाहिँ मिश्रित प्रणालीबाट पनि खोप वितरण गर्न सकिने खोप शाखाको भनाइ छ।